N'ogbe Gịnị mere karama iko nwere uru nke carbonated onunu? Ndị na-ebubata ya ma na-ebupụ ya | Na-enwu
Iko mmanụ a honeyụ ite
Iko jam ite
Iko ogwu ite
Iko mmanya ite
Karama iko maka mmanya
Mmanya karama iko
Mmanya karama mmanya
Amber iko biya karama
Iko ihe ọ juiceụ juiceụ iko
Karama mmiri ara ehi
Gịnị kpatara karama iko ji aba uru maka ihe ọ carbonụ carbonụ carbonated?
Glass bottles are more and more used as packaging containers for carbonated beverages, because carbonated beverages are mainly due to the taste problem caused by the content of carbon dioxide. Carbon dioxide gas is easy to volatilize. At the same time, karama iko nwere nnukwu ngwugwu akwara na ikuku dị mma. , Ya mere, uto ga-aka mma.
Gịnị kpatara karama iko ji aba uru maka mmanya na-egbu egbu?
Nke a bụ n'ihi usoro mmepụta nke karama iko. Usoro mmeputa nke karama iko bu ihe ndi ozo bu: ① Nhazi ihe ndi mbu. Kụtuo nnukwu ihe (quartz sand, soda ash, limestone, feldspar, wdg) iji kpoo akụrụngwa mmiri, ma wepụ ígwè sitere na ihe ndị nwere iron iji hụ na iko ahụ dị mma. ② Nkwadebe nke ogbe ihe. Gbaze. The iko ogbe ihe onwunwe na-ewe iwe na elu okpomọkụ (1550 ~ 1600 degrees) na a ọdọ mmiri oku ma ọ bụ a ọdọ mmiri oku na-etolite a edo, afụ-free mmiri mmiri iko na-ezukọ na ịkpụzi chọrọ. Ihe Tinye iko mmiri mmiri n’ime ebu iji mee ngwaahịa iko nke ọdịdị achọrọ, dịka efere dị larịị na arịa dị iche iche. At Ọgwụ ọgwụgwọ. Site annealing, quenching na ndị ọzọ Filiks, wepụ ma ọ bụ mepụta esịtidem nchegbu, adọ nkewa ma ọ bụ crystallization nke iko, na-agbanwe bughi steeti nke iko.
Gịnị bụ uru nke karama maka carbonated a drinkingụ karịa ndị ọzọ nkwakọ?
Iko karama bụ opekata mpe ifu gas, yabụ na ha nwere uto kachasị mma Ihe dị iche na karama rọba na ite igwe bụ na plastik bụ ihe polymer, na nhazi nke ụmụ irighiri ihe agaghị adị nso dị ka atam ọla, nke na-eme ka carbon dioxide yikarịrị ka ị ga-ehi mmiri. Gas dị na ihe ọatedụ carbonụ carbonated n'otu karama iko ahụ bụkwa Ọ dịghị mfe ihihi. Ya mere, uto nke cola na karama iko na Mkpọ dị mma karịa karama plastik. N'ime usoro njem na nchekwa, karama plastik na mkpọ mkpọ ga-eme ka nrụgide belata n'ihi nrụrụ nkwakọ ngwaahịa. Nsogbu a adịghị maka karama iko. Na mgbakwunye, ikike nke iko, iko aluminom na ite plastik ka nwere ike ịdị iche. Iko ahụ kwụsiri ike, ọ dịkwa mkpa ka ehichaa mgbidi dị n'ime tupu eji ya; Otú ọ dị, a na-ekpuchi mgbidi dị n'ime nke nwere ike nke aluminom alloy, na mgbidi dị n'ime karama plastik ahụ yiri ya. Plastics ma ọ bụ ihe mkpuchi plastik nwere ike imegharị na mmiri mmiri n'oge nchekwa, si otú a na-emetụta uto ahụ.
Akụkụ dị iche iche nke ire na-emetụ ihe ọ drinkụ drinkụ ahụ aka na mbụ, ụtọ ya dịkwa iche. Fọdụ ndị mmadụ na-eche na ụdị oghere dị iche iche nke ite na karama plastik na-eme ka ọnọdụ dị iche iche dị na ire pụta, na-ebute ọdịiche dị na uto: mgbe ị na-a drinkingụ ihe ọ ,ụ drinkingụ, cola na-emetụ akụkụ ihu nke ire, nke nwere uto uto ma nwee ihe. enwe mmetụta nke egosipụta na uto. N’ihi ya, enwere m mmetụta ka mma. Mgbe ị na-a drinkingụ ihe na karama, a na-awụ cola ahụ kpọmkwem n'etiti na azụ nke ire, ụtọ ya adịghịkwa ka nke mbụ, mana n'ihi na ọnụ ọgụgụ buru ibu na-abanye n'ime afọ ozugbo, ọ na-adịkwu ume ọhụrụ.
Ụlọ 306-307, Building 13 na ihe onwunwe ahịa xiadian ụzọ, Xuzhou 221000, Jiangsu Province, china
Biko nweere onwe gị ịjụ anyị ebe a, Daalụ!
Glass senti diffuser Bottle, Efu Glass senti diffuser Bottle , Aṅụ Water Glass Bottle , iberibe Mee Glass Wine Bottle , Mason ite 16 Oz Glass , Glass ite Honey ,